Kudya & Fund Dhiraivha - Galveston County Chikafu Bhangi
Kudya & Fund Dhiraivha
1 muvatanhatu vagari veGalveston County vanotarisana nekushomeka kwechikafu mazuva ese.
UNOGONA kuita mutsauko kumuvakidzani anoda rubatsiro.
Gadzira Chikafu kana Fund Dhiraivha!
Dzvanya Pano Kuti Utore Chikafu & Fund Dhizaidhi Pack
Dzvanya Pano Kuti Utarise Yedu Yazvino AmazonSmile Charity Chinyorwa
Dzvanya Yedu Logo kuti Utore Yakakwira Resolution Shanduro yeMako Ekushambadzira Zvinhu
Joinha isu mukutungamira kurwira kupedza nzara kuGalveston County, nekuti hapana munhu anofanirwa kufa nenzara.
Bata Julie Morreale pa Julie@galvestoncountyfoodbank.org
Chikafu chinotyaira MIBvunzo
Ndiani anogona kugamuchira chikafu chekutya?
Chero ani zvake anoda kubatsira kupedza nzara anogona kuitisa chikafu chekutya. Vanhu, mhuri, mapoka, makirabhu, masangano, machechi, mabhizinesi, zvikoro, nezvimwe…
Ndeapi mhando yezvinhu zvaunogamuchira zvekutyaira zvekutyaira?
Isu tinogamuchira mhando dzese dzechinhu chisingafe chikafu chiri pasherefu chakasimba uye chinoita kwete inoda firiji.
Zvinhu zvakaoma senge: mupunga, bhinzi, pasita, zviyo, oatmeal, nezvimwe…
Zvinhu zvemumagaba zvakaita semuto, muriwo, tuna, huku, bhinzi, nezvimwe…
Pop-pamusoro zvigadzirwa zvemumagaba uye zviri nyore kuvhura zvinhu zvinokosheswa kwazvo
Unogamuchira zvinhu zvisiri zvekudya here?
Ehe, isu tinogamuchirawo zvinhu zvehutsanana zvakadai se;
Ndezvipi zvinhu zvisingagamuchirwe?
zvekudya zvekugadzira pamba
chikafu chinoora chinoda firiji
zvinhu zvine mazuva akapera
zvinhu zvakapetwa kana kukuvara.
Ndeipi nzira dzakanakisa dzekubata chikafu chekutya?
Sarudza murongi kuti atarisire chikafu chekutya.
Sarudza Chinangwa chekudya kwaungade kuunganidza.
Sarudza Mazuva aungade kumhanyisa chikafu chako chekudya.
Sarudza Nzvimbo Yako yekutora zvinhu, nzvimbo ine vanhu vakawanda yakachengeteka.
Nyoresa neGCFB nekuendesa fomu rakapetwa reKudya & Fund Drive yekutora chikamu.
Kurudzira Dhiraivha Yako kuzivisa vamwe nezvechiitiko chako kuburikidza netsamba, email, mapepa, uye webhusaiti.
Dhawunirodha iyo Chikafu & Fund Dhizaidhi packet
Ndedzipi dzimwe nzira dzekumhanyisa chikafu chekutya?
Kudya kwemangwanani Zvinhu: zviyo, oatmeal, mabota ezviyo, chiriporipocho chisvusvuro, kusanganiswa kwepancake, nezvimwe
Vana Favorites: majusi, nzungu ruomba, granola mabara, macaroni & chizi, Chef Boyardee, zviyo
Kudya kwemanheru Nguva: Pastas, Marinara muto, nyama dzemumagaba senge huku kana tuna, "Kudya-mu-mubhokisi" senge Tuna Mubatsiri, Betty Crocker Mubatsiri Wakazadza Kudya, nezvimwe.
Brown Bhegi Kudya: Kurudzira boka rako kuti riuye nehombodo yebhuruu uye vape mari yavaizoshandisa pakudya kwemasikati.
Shandisa imwe makwikwi ane hushamwari kuti boka rako riwedzere kukurudzira kukurudzira. Gadzira zvikwata pakati pemakirasi, madhipatimendi, mapoka, pasi, nezvimwewo kuti uone kuti ndiani anounganidza chikafu chakanyanya. Ita shuwa kuti "vanokunda" vanogashira kukosheswa kwakakosha kwemupiro wavo.
Bvunza kana kambani yako ichigona kuenderana nechipo chako chekudya kuGalveston County Food Bank nekumisa dhora remari yakapihwa paundi yechikafu chakaunganidzwa. Bata kambani yako yeHuman Resources department nezve chirongwa chemari chemutambo.
Ndinozivisa sei chikafu changu chekudya?
Goverana chako chikafu chinotyaira kuburikidza nesocial media, tsamba dzematsamba, zvinyorwa, zviziviso, mapepa, memos, e-blast, uye maposta.
Iko kune yakakwira resolution yepamutemo yeGCFB logo pane ino peji inowanikwa kurodha pasi. Ndokumbirawo usanganise logo yedu pane chero zvigadzirwa zvekushambadzira zvaunoitira yako yekutyaira chiitiko. Kune mamwe matipi ekugadzira ekushambadzira zvinhu tora pasi Chikafu & Fund Dhizaidhi packet.
Tinoda kuda kutsigira chiitiko chako! Ita shuwa yekugovana mapepa ako nesu, kuti tikwanise kusimudzira chiitiko chako pane edu enhau mapuratifomu zvakare.
Ita shuwa kutimaka isu pasocial media!
Veruzhinji ndiyo kiyi yekubudirira dhiraivha!
Zvinhu zvese zvakapihwa zvinogamuchirwa kuimba yedu yekuchengetera iri pa624 4th Ave N, Texas City, TX. 77590. Muvhuro - Chishanu 8am kusvika 3pm.
GCFB inotora zvipo here?
Fund Dhiraivha Mibvunzo
Chii chinonzi fund drive?
Mari yekufambisa ndipo paunounganidza zvipo zvemari kuchipo kubhengi rezvikafu kuti ubatsire kutsigira zvirongwa zvakawanda zvinoitirwa kupa chikafu kune avo vanoshaya.
Zvirinani kupa mari pane chikafu?
Mari pamwe nechikafu zvese zvinobatsira kutsigira basa redu rekutungamira kurwisa kupedza nzara. NeGCFB kuve nhengo yeFeeding America uye Feeding Texas, simba redu rekutenga rinotibvumidza kupa chikafu chechina chega $ 4, izvo zvinotipa kugona kutenga chikafu chakawanda kupfuura icho vanhu vanogona kuenda kuchitoro.
Mari inogona kuunganidzwa sei kune fund drive?
Mari inogona kuunganidzwa semari, cheki kana online pawebhu yedu, www.asliceofhomeschoolpie.com.
Zvemari, kana vanhu vachipa mari vangade kugamuchira risiti inobvisirwa mutero, ndapota sanganisira zita ravo rizere, kero yekutumira, email nenhamba yefoni nemari yemari.
Zve macheki, ndokumbira ubhadhare kuGalveston County Chikafu Bhangi. Cherekedza rako sangano / zita reboka kuruboshwe kuruboshwe rwecheki, kuti chiitiko chako chiwane kiredhiti. Ona Chikafu & Fund Dhizaina packet semuenzaniso.
Zvepamhepo, paunotumira yako yakapera Chikafu & Fund Dhiraivha utizivise kuti iwe unoda kukurudzira zvipo zvepamhepo uye yakakosha tebhu inogona kuwedzerwa kune inodonhedza menyu, saka chiitiko chako chekutyaira chikafu chinowana kiredhiti yemari yemupiro online.
Ndingaite sei kutanga online online fundraiser?
Zviri nyore kutanga online fundraiser nekushanyira yedu JustGiving peji pano . Gadzirisa iro peji, gadzira chinangwa uye wozogovana chinongedzo kune yako online online fundraising peji neemail kana pa facebook ne twitter kuti uparidze izwi.
Ndokumbirawo muve nechokwadi chekumaka isu pasocial media.